Motorola Moto E6i: astaamaha, qiimaha iyo helitaanka | Androidsis
Motorola Moto E6i, mobilka cusub ee lagu soo saaray Android Go qeybta gelitaanka
Waxaa jira taleefan casri ah oo waxqabadkiisu hooseeyo oo suuqa yaala, waana kan Motorola Moto E6i, mid la yimaada Android 10 Go Edition iyo qiimo la awoodi karo oo loogu talagalay miisaaniyadda.
Taleefankan casriga ahi wuxuu leeyahay qeexitaanno farsamo oo dhammaad ah iyo astaamo, waana sababta loogu talagalay in loo adeegsado adeegsadayaasha dalabkoodu hooseeyo. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay waxyaabo badan oo la bixiyo, waxaanan ka hadlaynaa dhammaan sifooyinkeeda hoos ku xusan.
1 Tilmaamaha iyo qeexitaanka Motorola Moto E6i
Tilmaamaha iyo qeexitaanka Motorola Moto E6i
Bilawga, qalabkani wuxuu la yimaadaa shaashadda teknolojiyadda 6.1-inch IPS LCD iyo xallinta HD +. Midkani wuxuu leeyahay darajo u eg qaabka roobka oo ay kujiraan shidma kaamerad xallisa 5 MP. Taa baddalkeeda, waxaa lagu taageeraa looxyo iftiin ah iyo garka xoogaa loogu dhawaaqo, kaas oo caan ku ah moobiillada kala duwan.
Dhinaca kale, Motorola Moto E6i wuxuu leeyahay barnaamijka moobiilka ee loo yaqaan 'Unisoc Tiger SC9863A', oo ah processor chipset ah oo leh sideed buundo isla markaana ka shaqeeya ugu badnaan saacadda oo ah 1.6 GHz. 2 GB RAM iyo 32 GB meel kaydinta gudaha ah, kaas oo lagu kordhin karo kaarka microSD.
Batariga aan ka helno hoosta dusha sare ee terminalkan waa 3.000 mAh wuxuuna la jaan qaadayaa xawaaraha xawaaraha ee 10 W illaa dekedda microUSB.
Nidaamka kaamirada gadaal ee taleefanka ayaa ah mid labo waji leh wuxuuna ka kooban yahay 13 MP aaladda aasaasiga ah iyo 2 MP dareeraha labaad, oo labaduba ay ku xiran yihiin flash flash-ka. Diagonal ilaa moduleka, waxaa jira akhristaha sawirka faraha. Astaamaha kale waxay xusayaan 3.5mm Jack Jack.
Motorola Moto E6i waxaa laga bilaabay dalka Brazil iyadoo lagu iibinayo qiimo rasmi ah 1.099 Brazil reais, taas oo u dhiganta qiyaastii 170 euro heerka sarifka. Waxay ku timaadaa midabada cagaaran iyo midabada casaanka ah, mana jiro taariikh lagu sii deyn karo mobilada suuqyada kale, ama wax kasta oo daaha laga qaaday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola Moto E6i, mobilka cusub ee lagu soo saaray Android Go qeybta gelitaanka
Bilaabista taxanaha Redmi Note 10 ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay bisha Maarso
Sudoku Plus waa ciyaar aan caadi aheyn oo xujo badan oo caan ah loogu talagalay Android